Nri na ihe ọṅụṅụ a mata echiche maka Corporate Ihe - News Ọchịchị
Nri na ihe ọṅụṅụ a mata echiche maka Corporate Ihe
Mgbe ị na-ahazi a ụlọọrụ omume na ị chọrọ ihe niile na-agba ọsọ dị ka were were dị ka o kwere. Otu n'ime ndị kasị mkpa ihe i kwesịrị Hazie bụ nri na ihe ọṅụṅụ na ihe omume dị otú. Àgwà na nke ukwu nke nri na ihe ọṅụṅụ ị na-enye ekwu ọtụtụ ihe banyere ndị na-ahazi nke ụdị omume. Ọtụtụ ndị bịara na ndị a na ụdị ihe omume ndị mkpesa banyere ahapụ ihe omume agụụ na-agụ nke bụ ihe ịrịba ama na ị na-e-elekọta gị ọbịa nke ọma. Ndị a bụ ụfọdụ nri na ihe ọṅụṅụ echiche maka ụlọọrụ ihe.
Mgbe i nwere a nri ehihie omume, dị iche iche ndị bịara ga-enwe dị iche iche a chọrọ. Otú ọ dị, -amalite site na àjà ọbịa ụfọdụ Obere-snacks na-aba n'anya na ndị dị otú ahụ dị ka tii na kọfị. A ọzọ ọkpụrụkpụ nri ga-ọnọ emechaa n'ụbọchị. Nke a ga-agbaso site eji megharịa ọnụ na n'ikpeazụ tii na kọfị, otu ugboro ọzọ.
Mmanya ma ọ bụ ọṅụṅụ Party
Nke a na ụdị ụlọọrụ omume bụ obere iwu karịa ndị ọzọ ụdị ma na-aga. Otú ọ dị, ị ka kwesịrị inye ọtụtụ nri na ihe ọṅụṅụ iji mee ka a oké echiche. A themed abalị na yiri ihe oriri na ọṅụṅụ nwere ike ụtọ karịa nanị inye free ọṅụṅụ.
Ndị bịara na-enye elu ha free oge na-aga ụdị omume. Ha na-atụ anya ga-ejikọ ha a free mmanya. Nke a mmanya kwesịrị ịgụnye niile nke ọṅụṅụ ndị a ndị mmadụ na-ahọrọ na-aṅụ. Ụfọdụ ga-achọ na-abụghị mmịn, ụfọdụ ga-arapara mgbe nile ọṅụṅụ, ebe ndị ọzọ ga-achọ ihe ka emezu oké dị ka cocktails.
Ndị bịara eleghị anya na-agaghị atụ anya na a zuru nri abalị na nke a na ụdị ihe omume. Otú ọ dị, ị kwesịrị ị na-enye ọtụtụ nke snacks na asatọ niile attendee chọrọ. Cheta, ụfọdụ ndị nwere allergies ma ọ bụ adịghị iri ihe oriri ụfọdụ. Nke a ga-akpọrọ n'ime na akaụntụ na ọzọ na-eri nhọrọ ga-mere dị ka ndị na-aga gị ihe omume.
Conferences na- oge karị ka ndị ọzọ ụdị ụlọọrụ ihe. Nke a pụtara ndị bịara achọ ihe oriri na ihe ọṅụṅụ nile ụbọchị.
Ihe omume ndị a na-ejikarị-amalite n'isi-ututu. N'ọtụtụ ọnọdụ, ndị bịara eme ogologo njem na-anọbọ chi a ụlọọrụ omume center dị ka onye ahụ dị na www.chateaupolonez.com. Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe na gị bịara na-anọ na a ụlọọrụ omume center na Houston, ị kwesịrị ijide n'aka na ha amalite ụbọchị na a keukwu nri ụtụtụ. -Aba n'Anya na snacks kwesịrị nyere nile ụbọchị.
n'oge nri ehihie, a karị keukwu nri a chọrọ. Nke a kwesịrị ejikari-agụnye dịkarịa ala atọ ọmụmụ. Ka ụbọchị na-aga n'ihu, obere oge izu kwesịrị iwere nke mere na ndị bịara nwere ike inwe a onunu na ụfọdụ snacks. Ọ bụ eleghị anya ndị maara ihe ghara ịme ihe ọ bụla na-aba n'anya n'ime obodo ruo mgbe azụmahịa n'akụkụ nke ihe e dechara.
Ozugbo ogbako kwuchara, enye ụfọdụ free ọṅụṅụ nwere ike ịbụ ụzọ dị irè ha dị ná mma karịa na ndị bịara. Nke a nwere ike ịbụ ihe ndị kwesịrị ekwesị ma ọ bụrụ na ihe omume na-ewe ebe n'elu ọtụtụ ụbọchị.
Ọ bụghị ihe niile ụlọọrụ ihe bụ otu. Nke a pụtara na ị ga-enye a kwesịrị ekwesị ego nke elu-edu nri na ihe ọṅụṅụ maka gị ndị bịara. Nke a na-àmà site ụbọchị zuru ihe mkpumkpu ihe ebe obere nri na ihe ọṅụṅụ a chọrọ. The echiche n'elu ga-enyere gị aka ime a mma Mkpebi banyere ihe nri na ihe ọṅụṅụ inye gị ọzọ ụlọọrụ omume.
← New ọgwụ na-emeso ịda mbà n'obi na-erughị 24 awa ! [Na] Ndi afọ n'ezie belata gị IQ? →